Kuvapo kweIntel processors muiyo iPhone 7 inosimbiswa | IPhone nhau
iFixit yanga iri pabasa kwemazuva akati wandei ikozvino, havana kukwanisa kuzvibatsira, uye chokwadi ndechekuti isu tinoda basa ravanoita vachikorobha maApple madhivha kuti tizive isu vega zvavanazvo mukati, kwete izvo chete, asiwo nekuti vakazvipira kugadzira tutorials dzinotibvumidza kugadzirisa zvirinani zvishandiso nemaoko edu, tichidzivirira rwendo kuenda kune inodhura technical technical service. iFixit yakaparadzanisa iyo "A1778" modhi yeiyo iPhone 7 ine 128GB yekuchengetedza uye ikashamisika, uye ndeyekuti iyi iPhone ine isina kuburitswa Intel processor kusvika zvino.
Haisi nguva yekutanga isu tataura nezve marongero anoita Intel kupinda nharembozha, izvi imhaka yekuti mashoma uye mashoma makomputa edesktop anotengeswa, uye iwo anotengeswa anowanzo aine epasi kana epakati-renji mapurosesa, kuyedza kuchengetedza yakanyanya zvinogoneka. Kunyange zvakadaro, icho chiitiko chisingaitike nemafoni nhare, zvirinani uye zvirinani zviri kutengeswa (kunyangwe iyo yepakati-renji inotungamira). Neichi chikonzero, Intel yakamanikidzwa kuchinjira kunguva nyowani, uye ndeupi mubatsiri ari nani pane Apple, kambani iyo yaanoziva kwazvo kwenguva yakareba, sezvo iri yega mutengesi weva processor vanofambisa ese Mac mac makomputa.
Muchidimbu, Zvinotaridza kuti iwo "A1778" uye "A1784" mamodheru eiyo iPhone 7 anosanganisira iyo Intel processor, iyo isingatsigire CDMA mitsara, saka haigone kushandiswa neVerizon kana Sprint muUnited States of America. Muchidimbu, zvinoita sekunge Apple yasarudza kuwedzera mubatanidzwa neIntel, nenzira iyi hatizoshamiswa kuziva kuti Intel inova mutengesi wega wevagadziri veese maApple zvishandiso, chimwe chinhu chingatishamisa kana kusaratidzika zvakaipa zvachose., sezvo Intel iri imwe yemakambani anozivikanwa kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Kuvapo kwekumira kweIntel SoC muiyo iPhone 7 inosimbiswa
ndiyo ModEM kwete iyo PROCESSOR izvo zvinobva kuna Intel… processor yacho inobva kuTSMC ……… ..